AKHRI: Nuxurka War-murtiyeedkii maanta ka soo baxay Shirkii Iskaashiga Somaliya iyo Caalamka | HalQaran.com
Home Wararka Maanta AKHRI: Nuxurka War-murtiyeedkii maanta ka soo baxay Shirkii Iskaashiga Somaliya iyo Caalamka
AKHRI: Nuxurka War-murtiyeedkii maanta ka soo baxay Shirkii Iskaashiga Somaliya iyo Caalamka
Muqdisho (Halqaran.com) – Soomaaliya iyo saaxibadeeda caalamku waxay 1dii iyo 2dii bishan Octoobar 2019 kulan ku qaateen magaalada Muqdisho, kulankaasoo ka mid ahaa kulamadii Madasha Iskaashiga Soomaaliya iyo Caalamka. Ka soo qeybgalayaasha waxay aad uga hadleen horumarkii la sameeyay tan iyo kulankii ugu dambeeyay Madasha Iskaashiga Soomaaliya iyo Caalamka ee dhacay bishii Luulyo 2018 oo la isku raacay in si wadajir ah loo qaado tallaabooyinka mudnaanta leh ee lagu abbaarayo caqabadaha harsan.
Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka waxaa ay isku raaceen in si wadajir ah ay wax uga qabtaan maareynta biyaha, horumarinta shirkadaha ganacsiga ee gaarka loo leeyahay, is-dhexgalka ganacsiga gobolka, iyo hagaajinta kaabayaasha adeegyada. Dowladda Federaalka Soomaaliya, waxa ay ku talo jirtaa in sameyso, siyaasad qaran oo lagu xallinayo is-beddelka cimilada iyo in ay sameyso shuruuc dhiirrigalineysa shaqo abuur.
Shirkii Iskaashiga Somaliya iyo Caalamka